२०७८ असार ४,शुक्रबार
एक युवतीलाई आफूसँग सम्बन्ध रहेको युवकको अर्की प्रेमिका रहेको थाहा पाउँदा कस्तो पीडा होला अनि ती दुवै प्रेमिकालाई ती युवकले एकै ठाउँमा भेटाएर कुराकानी गर्न लगाउँदा कस्तो महसुस गलान् ?
पक्कै पनि दुवैले ती युवकलाई धोकेवाज भनेर गाली गर्नेछन् । उनको इमान्दारिता र चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने छन् । अन्ततः दुवैमध्ये एकले वा दुवै जनाले त्यो केटाको साथ छाड्न सक्छन् ।
यस्तो अवस्थामा दुवै प्रेमिकाले एउटै केटासँग बिहे गरेर बस्छौँ भने के होला ? यो सम्भावनाबारे सोच्न पनि कठिन पर्छ तर भारत छत्तिसगढका दुई युवती र एक युवकले यसलाई सम्भव बनाइ दिएका छन् ।
छत्तिसगढको बस्तर जिल्ला निवासी २४ वर्षीया चन्दु मौर्यले एकैसाथ दुई युवतीलाई एउटै मण्डपबाट बिहे गरेका छन् । उनले यही जवनरी ५ मा २१ वर्षीया सुन्दरी कश्यप । २० वर्षीया हसिना बघेलका साथ विवाह गरेका हुन् । उनले आफ्नै घरमा ठूलो संख्यामा गाउँलेको उपस्थितिमा विवाह गरेका हुन् ।
३ वर्ष पहिले बस्तर जिल्लाकै लोकापाल क्षेत्रमा बिजुलीको पोल हाल्ने काममा गएका थिए । त्यहाँ उनको सुन्दरीसँग भेट भयो । यस क्रममा दुवैजना नजिक भए । पछि उनीहरुको निकटता प्रेममा परिणत भयो।
करिब एक वर्ष पहिले फेरि चन्दुको जीवनका हसिनाको प्रवेश भयो । चन्दु गाउँमा भएको एक विवाह समारोहमा गएका थिए । त्यहाँ हसिनापनि आएकी थिइन् । त्यहाँ भेटभएपछि दुवै नजिक भए । त्यसपछिका दिनमा हसिनाले चन्दुलाई आफ्नो जीवनसाथीका रुपमा हेर्न थालिन् ।
चन्दुलाई यो कुरा भनिन् पनि । अनि चन्दुले आफ्नी प्रेमिका सुन्दरीका बारेमा हसिनालाई जानकारी दिए । पहिलेकी प्रेमिकालाई धोका दिन नसक्ने पनि स्पष्ट पारे ।
यस कुराले हसिना दुःखी भइनन् । बरु अर्की प्रेमिकासँगै आफू पनि चन्दुसँग बिहे गर्न तयार रहेको बताइन् ।
यस कुराले चन्दु अचम्मित भए । उनले दुवै प्रेमिकासँग यसबारे कुराकानी गरेर भेटाए । दुवै जना चन्दुसँगै एकसाथ बिहे गर्न सहमत भए।
युवतीका परिवार र गाउँलेहरुले पहिले यस कुरामा आपत्ति जनाए पनि पछि उनीहलाई साथ दिएका थिए । उनीहरुलाई सुखद् जीवनका कामना गर्दै आशीर्वाद दिएका थिए । सुन्दरीका परिवार नआएपनि हसिनाका परिवार विवाह समारोहमा सामेल भएका थिए ।
उनको विवाहमा करिब ५०० सय जनाको उपस्थिति थियो ।
उनले विवाहका लागि छपाएको निमन्त्रणा कार्ड र विवाहको भिडियो भारतभर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको थियो।